san_francisco_mega _photoreal- ရှုခင်း
san_francisco_mega _photoreal- ရှုခင်း 1 လ3weeks ago #1814
ငါ san_francisco_mega _photoreal- ရှုခင်း၏ "ရှုခင်း" subfolder ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည် FSX "ရှုခင်း" ဖိုင်တွဲထဲမှာ folder ကို။
ထဲမှာ FSX ဦး စားပေး ၁ နှင့်အတူဖွင့်ထားသည့် "San Francisco-Mega Photoreal Scenery Rik" ရှုခင်းစာကြည့်တိုက်တွင်ကျွန်ုပ်ကြည့်နေသောအစီအစဉ်။
လေဆိပ်မှာငါဆန်ဖရန်စစ္စကိုအပြည်ပြည်ကိုရွေးခဲ့တယ် လက်ရှိတည်နေရာအဖြစ် "KSFO" ။
ကံမကောင်းစွာပဲငါသာပုံမှန်ကြည့်ပါ FSX San Francisco မှရှုခင်း။
သင်၏ဆန်ဖရန်စစ္စကို Rik ရှုခင်းကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
san_francisco_mega _photoreal- ရှုခင်း 1 လ 1 လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းတပတ် #1834
နှစ်တစ်နှစ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်မော်ကွန်းတင်သောရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကိုအမြဲစိမ်းနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည် vidmate လွန်ခဲ့သောနှစ်များမှအကြိုက်ဆုံးများ၊ ဤအင်္ဂါရပ်အရှည်ဆုံးအစီအစဉ်သည်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ရှိလူများ၊ ရပ်ကွက်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းမှ ၀၁၀၈၀ အထိပြသခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် Kasey00.
san_francisco_mega _photoreal- ရှုခင်း 1 days ago5လ #1848
It would appear after waiting for2weeks that nobody has an answer for you. I was going to download the airport but even when I log in it still says7hours to download and not the 2.5 that they state.
Hope you get an answer, I gave up with the download as7hours isajoke, I know its free but hey, I registered and got conned as the download is no quicker than if I were unregistered.
san_francisco_mega _photoreal- ရှုခင်း 1 days ago3လ #1849
I really wanted to install the scenery from San Fransico airport in the FSX because I have landed and started several times at this airport. So I invested the7hours for the download. All the more I'm disappointed that I can not use this scenery. My problem I also have written to Contact Rikoooo via E-mail and received also no answer.
san_francisco_mega _photoreal- ရှုခင်း 1 days ago3လ #1850
I downloaded this again yesterday, even if you register itsa7 hour stint but then to add insult to injury the zip file was corrup and it would NOT install. I'm off to buy it from elsewhere now as I have had enough of this messing around. Good luck.
san_francisco_mega _photoreal- ရှုခင်း 1 days ago3လ #1851
I downloaded it again yesterday,7hour drudge, but it failed to install as the Zip file was corrrupt. I've now given up, I know its free but to be honest itsapain to download and then it doesn't install anyway.
I'm going to buy it from elsewhere now.
You will need it !!
0.271 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်